व्यापक पैसाको खोलो बगाएर माधवले नयाँ पार्टी बनेको खुलासा, कहाँबाट कति आयो पैसा ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
व्यापक पैसाको खोलो बगाएर माधवले नयाँ पार्टी बनेको खुलासा, कहाँबाट कति आयो पैसा ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पैसामा बिक्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालमाथि पैसाका लागि विभिन्न धार्मिक संगठनको कार्यक्रममा समेत सरिक भएको आ रो प लगाए ।
‘मौका मिल्दा बुद्धिष्ट संगठनको अध्यक्ष समेत बन्ने, दक्षिणा प्राप्त हुन्छ भने,’ ओलीले माधव नेपालमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भने । विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दाम चढाएको समेत उल्लेख गरे ।
उनले भने, वरिपरि दाम चढाएर हुलाकबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनी निवेदन हालेको । माधव नेपाल जस्तो सरम पचेको मान्छे नदेखेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘माधव नेपाल जस्तो सरम पचेको मान्छे दुनियाँमा देखेको पनि छैन ।’
माधव नेपालले पार्टीको नेतृत्व गर्दा नेकपा एमालेको ख रा ब अवस्था रहेको बताए । माधव नेपाल पार्टी भन्दै भविष्यमा उनी एक्लै हुने समेत ठोकुवा गरे ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पैसामा बिक्ने व्यक्ति भएको आ रो प लगाएका छन् । उनले नेपालमाथि पैसाका लागि विभिन्न धार्मिक संगठनको कार्यक्रममा समेत सरिक भएको आरोप लगाए ।
मौका मिल्दा बुद्धिष्ट संगठनको अध्यक्ष समेत बन्ने, दक्षिणा प्राप्त हुन्छ भने,’ ओलीले माधव नेपालमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भने । विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दाम चढाएको समेत उल्लेख गरे ।
माधव नेपालले पार्टीको नेतृत्व गर्दा नेकपा एमालेको खराब अवस्था रहेको बताए । माधव नेपाल पार्टी भन्दै भविष्यमा उनी एक्लै हुने समेत ठोकुवा गरे ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पैसामा बिक्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालमाथि पैसाका लागि विभिन्न धार्मिक संगठनको कार्यक्रममा समेत सरिक भएको आरोप लगाए ।